Logan Cup Archives | 263Chat, Convening dialogue in Zimbabwe
Staff Reporter Feb 6, 2020
Vital wickets by Donald Tiripano and Roy Kaia of Mountaineers did most to turn what looked like being a close match against Eagles at Harare Sports Club today in favour of their team. Tiripano removed three top-order Eagles batsmen and…
Eagles Fly Past Rhino in Logan Cup Opener
Rhinos captain Prince Masvaure achieve a rare feat in Zimbabwean cricket yesterday, the only real success in his team’s unhappy innings defeat at the hands of Eagles at Harare Sports Club. It took just over 20 minutes for Tino Mutombodzi…
Lovejoy Mutongwiza Dec 13, 2019
If ever there was a time when the rains became an enemy of humanity was yesterday during the opening match of the Logan Cup when Eagles were soaring high over the Rhinos in Harare. Deadly bowling attacking trio of Blessing Muzarabani,…
Staff Reporter Dec 11, 2019
Blessing Muzarabani is back on the local scene and he will feature for Eagles as an overseas player in Zimbabwe’s 2019/20 domestic season that is set to begin this Thursday. Eagles are expected to unleash the 23-year-old fast bowler when…
Despite losing two of their stalwarts, Mountaineers will be looking to lift the Logan Cup for a historic fourth time in a row as the first-class competition gets Zimbabwe’s 2019/20 domestic season underway on Thursday this week. The…
Chapungu hogs the limelight with seven-wicket haul
Staff Reporter Nov 7, 2017
Nobody would have guessed that the star performance of the first day’s play in this Logan Cup match at Kwekwe Sports Club would be a seven-wicket haul by Midlands Rhinos’ dynamic opening batsman and occasional off-spinner Bothwell Chapungu.…